यस्तो रहेछ पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात ! | suryakhabar.com
Home विचित्र संसार यस्तो रहेछ पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात !
काठमाडौँ । द्रोपतीले पाँचवटा श्रीमानसँग विवाह गरेको कुरा त तपाईले महाभारतमा पढ्नु नै भएको होला । अव तर पाँच श्रीमान भएकी उनले कसरी सुहागरात मनाईन भन्ने कुरा अझ रोचक रहेको छ । दुर्योधनले पाँचै भाई पाण्डबहरुलाई मार्ने खवर फैलिएपछि, डराएका पाण्डबहरु आमा कुन्ति सहित ब्राम्हण जीवन ब्यतित गर्न थालेका थिए । यसरी पाण्डवहरु हरेक दिन भिक्षामा आएको सामा आमालाई सुम्पिएर मात्रै उपभोग गर्ने गर्दथे ।